Kutheni ubudlelwane phakathi kwendoda nomfazi behla? Kutheni kubekho umanyano onoyolo kwaye ohlala njalo uhlahloka kwiindawo zokuhlala? Ngaba kunokwenzeka ukuseka ubudlelwane nomlingane ukuba uthetha ngokubanzi ngokuqhawula umtshato? Namhlanje siza kuthetha malunga nendlela yokuseka ubudlelwane nomyeni wakhe kwiqabane lomtshato.
Okokuqala, kuyafaneleka ukuqonda ukuba yintoni isizathu sesifo kunye nantoni na ukuba sele usecaleni lomtshato. Ngokuqhelekileyo loo mbhangqwana ixabana ngenxa yokuba into ayihambisani nayo. Kukho iintlobo zamadoda ezenza iimvakalelo ezintle kumfazi, ngoko ke kwintsapho kunye nokuxabana, ukuxabana kunye nesiphakamiso somtshato.
Abayeni abashushu basanelisekanga nasiphi na isizathu, bahlala behlula kumfazi wakhe, bamemeza, bafunge, ngamanye amaxesha banokubetha itafile ngeentonga zabo;
- abakhonkco banakho ukulungiselela umcimbi ukususela ekuqaleni. Umsebenzi wabo oyintloko kukukhupha iimvakalelo ezimbi, ukufumana amandla komnye umntu. Ngokuqhelekileyo abafazi bale madoda, bezama ukugcina intsapho, bonke bahlupheka, bavumela ukuba bathinteke;
Abayeni abahlazolayo bathambekele ekuhlaziseni abafazi, bebiza amagama angabonakaliyo, ehlisa ukuzithemba;
- womanizer unokuncokola kunye namantombazana akho phambi kwamehlo akho, kwaye ukusuka kwimbono yowesifazane ohlambulukileyo kwaye ontle amahle ahlamba. Mhlawumbi, ngokwenza oku, bafuna ukukubonisa kwakhona ukuba awuyikunyamekela umyeni wakho.
Ngokutsho kweengcali zengqondo, kunye nawaphi na amadoda onokufumana ulwimi oluqhelekileyo uze uvelise ubuhlobo ngokuqhelekileyo, ukuseka ubudlelwane nomyeni wakhe ngaphandle komtshato, ukugcina intsapho, kwaye unike iziphakamiso ezilandelayo:
1. Ngokuqhelekileyo udumise lakho iqabane, ngakumbi kuluntu. Uya kuvuyela ukuva ukuncoma, ingakumbi kwindawo ebaluleke kakhulu kuye.
2. Njengoko uyazi, ukuhleka yindlela ephilileyo yokunyamezela. Fumana imeko kunye nezinto onokuzihleka ndawonye rhoqo. Ngendlela yokuhlambalaza, phatha iimeko ezinzima kunye neengxaki.
3. Khangela ixesha kunye nendawo yokuchitha ixesha kunye. Akufuneki ukuphumla elwandle. Unelungelo lokuya kwindawo yokutyela okanye ngeveki kwi-cottage. Into ephambili kukuba ube yedwa.
4. Ngexesha elizayo xa ubona ukunqamla komlingane, kumomotheka. Yenza oko njalo xa ufuna ukususa imeko kwaye uphucule imeko.
5. Zama ukuthinta umyeni wakho ngokuphindaphindiweyo, ngengozi, ngengozi, ngokungabandakanyeki. I-10 kuphela echaphazela usuku iya kunceda ukuphucula umoya wexesha.
6. Zama ukuthetha ngakumbi, ngakumbi kwizihloko ezikukhathazayo. Makuvumele ukuba loo mntu aqaphele ukuba uluvo lwakhe nolwazi lubaluleke kakhulu kuwe. Musa ukuzifihla iimvakalelo zakho, oku kuya kuba nzima kakhulu kwaye kuhlengahlengele imeko.
7. Bhala uluhlu lwezinto ozithandayo kwiqabane lakho. Yaye jolisa kule mimpawu. Oku kuya kukuvumela ukuba ukhumbule ukuqala kobudlelwane bakho, xa ezi zinto zibonakalisa iimvakalelo ezimnandi.
8. Ngokuqhelekileyo iinkcubeko zentsapho zigcina umanyano. Cinga kunye okanye uhlele kunye neqabane elithile lezithethe zentsapho, okumele kube ngumkhwa kwaye ube rhoqo. Ngoko unokuchitha ixesha elide kunye kunye nokuthetha ngakumbi.
9. Yenza oko umyeni wakho ulinde kuwe. Kwaye nina babini kuphela owaziyo ngalo.
Ukuba ukwenza ngokukhawuleza ezinye zeziphakamiso zingakapheli iiyure ezingama-72, isiphumo esheshayo siqinisekisiwe.
Ukuxhaswa kwengqondo yinto enye ebalulekileyo yobuntsapho. Kwesinye isihlandlo, omnye wabafazi uqala ukungabaza ukuvakalelwa, nangona kunjalo ukuba intsapho ilungile. Oku kubangelwa ulwahlulo kumandla amnandi weehafu.
Ngamnye wethu uneempawu ezithile ezibonisa ukuba novelwano kwabanye. Kwaye siyazi kakuhle ngabo kwaye sinokuyandisa ngokuphindaphindiweyo. Kule minyaka, siyaqonda ukuba yiziphi iimpawu ezingabonakaliswa, kwaye, ngokuchaseneyo, zibonisa. Nangona ukukhwabanisa nokukrakra ngexesha lobudlelwane luzama ukupha inceba ukwenzela ukubonisa ubungeniso.
Izibini ezininzi zakha ubudlelwane babo ngomgaqo wokulingana. Yingakho imitshato eminingi engalinganiyo idibeneyo kwiimeko ezininzi: okokuqala ukungalingani. Kwaye ke umdlali owaziwayo, owaziwayo, ufumene enye inzondelelo kunye nomoya onjalo, ngenxa yokuba umfazi wakhe owayengumfazi wakhe umva waba yimpundu.
Izibini ezithandekayo, ngelixa ulwalamano lwabo luvumelana ngokufanayo, zifana kunye nangaphandle kunye neempawu zangaphakathi. Kwaye ukuba ukungafaniseki kubakho, ke amandla enqwenelekayo ahlawulwa ngenye into.
Kodwa yintoni enokuyenza xa kuphuma iimvakalelo, indlela yokuphucula ubudlelwane nomyeni wakhe, indlela yokuziphatha ngayo?
Kukho ezinye iindululo ezifunekayo wonke umntu.
1. Yinyanise nomyeni wakho. Oku akuthethi ukuba ufanele uxelele ngokukhawuleza zonke iimfihlelo ezazifihliweyo ngaphambili, kodwa ukunyaniseka kunokukunceda ukuziva ulwalamano olungokomoya kunye nokuqonda.
2. Ngokuqhelekileyo ekuqaleni kobudlelwane, uthando ludidekile. Funda ukuqonda ezi mpendulo.
3. Cacisa indlela ojonga ngayo umtshato wakho kunye nento oyifunayo kumlingane wakho. Yaye umxelele ngaye, kuquka necandelo lezesondo.
4. Yibani! Emva koko, unenjongo efanayo - ukugcina intsapho.
5. Yamkela umlingane wakho njengokuba. Hlonipha uluvo lwakhe.
6. Khuthaza kwaye uvume zonke iinguqu ezingcono kumntu weqabane lakho, ubonise ngobumnene iimpembelelo zayo uze uncede ukulungisa.
7. Sombulula iingxaki njengoko zivela. Musa ukuvuselela imbonakalo yabo kwaye musa ukusigxotha isigqibo sabo.
8. Iingxaki zixazulula uxolo, ngokuqhelekileyo ziya kuhlaselwa.
9. Mamela lakho iqabane kwaye ulive!
10. Cwangcisa ubomi bakho kwikamva.
11. Zibukele, zikhangele!
12. Ukwabelana ngesondo - enye yezinto ezibalulekileyo zobomi bentsapho. Musa ukukhanyela ngokungafanelekanga iqabane lakho kule nto.
13. Ukukwazi ukucela ukuxolelwa iimpazamo zakho uze uxolele umlingane wabo.
14. Zama ukuzimelela ngombono womnye umntu, kubandakanywa nembono yeqabane. Ungamthobeli kuye.
15. Fumana ubuncinane isifundo esisodwa kunye kunye nokwenza isithethe sentsapho.
16. Ukuba ulwalamano oluhambelanayo, kubaluleke kakhulu ukubeka iliso impilo yakho.
Ingxabano phakathi kwabatshatileyo yinkinga phakathi kwentsapho. Yaye inokusombulula kuphela ukuba kukho imvakalelo kunye kunye nesifiso esifanayo sokugcina intsapho. Khangela indlela oziphethe ngayo ngaphandle, hlalutya imicimbi esandula ukuyenza kwintsapho. Mhlawumbi, nguwe owenza into engalunganga. Ukubuyisela isimo sengqondo kuya kunceda uthando, intlonipho nomonde.
Ungadlala lo mdlalo: ukutshintsha iimvakalelo ezintle, isimo sengqondo esihle. Unika, kodwa ngokubuyisela kufuneka ufumane oko ufuna. Intsapho yinkqubo enzima yomsebenzi, ukugcinwa kwezinto ezinokulinganisela kudinga amandla amaninzi, amandla kunye nokuqonda. Yaye khumbula, umtshato awuyi kusombulula iingxaki zakho. Unokutshata kwaye uqhawule ngokuphindaphindiweyo, kodwa ungalokothi ufumane intsapho yolonwabo. Kuye kumntu kwaye ukuyiqonda ngeempawu zakhe. Ngoku uyazi indlela yokuseka ubudlelwane nomyeni wakho ngaphandle komtshato, ukuze ulondoloze intsapho.
Ukuhlawula i-alimony emva komtshato
Indlela yokuphepha umtshato?
Iisanti kunye neTyhuna
I-intrigues yamaHhovisi ekuhlanganyeleni
Ingqondo yeentlalontle zentsapho: umona
Ubomi emva kokufa: amaqiniso kunye namahlebezi
I-Chicory, izakhiwo ezifanelekileyo ziselo
Intombi yam intombi
Izipikili ziphukile: yintoni enokuyenza?
Isaladi e-spicy yamakhukhamba kunye neeqathi